C/raxmaan C/shakuur oo ka baxay Madasha Xisbiyada Mucaaradka ah - Awdinle Online
C/raxmaan C/shakuur oo ka baxay Madasha Xisbiyada Mucaaradka ah
October 29, 2019 (AO) – Xisbiga Wadajir ee uu hoggaamiyo C/raxmaan C/shakuur ayaa ka hor-yimid in Madasha ay ku midoobeen qaar ka mid ah Xisbiyada Siyaasadda ay yeelato Guddoomiye.
Xubin ka tirsan Xisbiga Wadajir ayaa u sheegay warbaahint in aanay ku jirin Madasha Xisbiyada Qaran oo aanay qeyb ka aheyn
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in C/raxmaan C/shakuur uu diiday in Madashu yeelato Guddoomiye, taas bedelkeed uu soo jeediyay inay Xiriiriye kaliya yeelato.
Warar kale oo aan ka soo xiganay xubnaha ku jira Madasha Xisbiyada ayaa inoo sheegay in C/raxmaan C/shakuur uu diidanaa in lala baal maro Guddoomiyaha Madasha Xisbiyada Qaran.
Xisbiyada Himilo Qaran, UPD, Ilays, Kulan iyo Xisbiga Nabadda ayaa soo jeediyay in Madasha ay yeelato Guddoomiye, iyadoo u tanaasulay inuu noqdo Guddoomiyaha Madasha Madaxweynihii hore ee dowladdii KMG aheyd Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Ujeedka Madasha mucaaradka ayaa ah inay u howl gasho sidii loo xaqiijin lahaa doorasho xor iyo xalaal ah oo dalka ka dhacda, iyadoo loolan la galeysa dowladda Federaalka, isla markaana sanadka ka haray xilka Madaxweyne Farmaajo tartan siyaasadeed adag la geli doonta, waxaana lagu wadaa in si rasmi ah loogu dhawaaqo todoobaadka soo socda.
Todobaadka soo socda ayaa lagu wadaa inay Muqdisho ka dhacdo Munaasabad lagu shaacinayo Guddoomiyaha Madasha Xisbiyada Qaran, iyadoo durba Madashu yeelatay astaan.
Previous articleDegmada Berdaale waxaa Ka Barakacay 6,000 oo Qoys :- (Sawiro)
Next articleMeeting between Ministers of Defence of the Russian Federation and Somalia